येशू को हुनुहुन्छ ? – Bachan Tv
BACHAN TV January 2, 2018
हाम्रो अध्ययनको शीर्षक रहेको छः येशू को हुनुहुन्छ? यसको जवाफ कपोलकल्पित, सतही र पूर्वाग्रही नभई गहन अध्ययनमा आधारित तर्कसङ्गत निष्कर्ष हुनुपर्छ । त्यसको लागि तपाईं र मैले स्रोतहरूलाई केलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
१. ख्रीष्टियान स्रोतहरू
ख्रीष्टियान स्रोतहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ: नयाँ करार र नयाँ करारेतर (नयाँ करार बाहेकका) दस्ताबेजहरू ।
क. नयाँ करार
नयाँ करारका सत्ताइसवटा पुस्तक येशूको बारेमा बताउने सर्वाधिक भरपर्दा प्राथमिक स्रोतहरू हुन् । ५,००० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा भएका नयाँ करारका विद्यमान ग्रिक पाण्डुलिपिले नयाँ करारको ऐतिहासिक सच्चाइको पुष्टि गर्छन् । येशूको मृत्युको करिब ६५ वर्षभित्रमा नयाँ करारका सबै पुस्तक लेखिएका थिए । सत्ताइसवटामध्ये कम्तीमा पनि दसवटा पुस्तक उहाँसँगै हिँड्नेहरूले लेखे । पुनरुत्थान हुनुभएका मुक्तिदाताका प्रत्यक्षदर्शी पावलले १३ ओटा पत्र कोरे । येशूको ऐतिहासिक अस्तित्वको लागि नयाँ करारमा अखण्डनीय साक्षीहरू समावेश छन् । इतिहासकारसाथै कानुनविद् जोन मोन्टगोमरीले स्पष्ट रूपमा बताएका छन् कि येशूको वास्तविक वर्णनको लागि एउटा इतिहासकार नयाँ करारका दस्ताबेजहरूमाथि भर पर्न सक्छ । स्वेच्छाचारी सोचाइ, दार्शनिक पूर्वाग्रह र साहित्यिक चालबाजीले यस वर्णनलाई अतर्कसङ्गत बनाउन सक्दैन भनी उसलाई थाहा छ ।
ख. नयाँ करारेतर दस्ताबेजहरू
हामीसँग प्रेरितिय पिताहरूद्वारा लिखित पउल रचनाहरू छन् । नयाँ करारपश्चात् तिनीहरू नै सबैभन्दा प्रारम्भिक ख्रीष्टियान लेखकहरू थिए । प्रेरितीय पिताहरूका रचनाहरूमध्ये इग्नेसियसद्वारा लिखित सातवटा पत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । इग्नेसियस सिरियाको एन्टिओखियाका बिशप थिए जो रोमी सम्राट् ट्राजनको शासनकालमा ११७ अगि सहिद भएका थिए । तिनले येशूको मानवतासाथै ईश्वरत्वलाई जोड दिएका छन् । तिनले आफ्नो एउटा पत्रमा लेखेका छन् कि पिलातसको समयमा येशूलाई दण्ड दिइयो; उहाँलाई क्रुसमा चढाइयो र उहाँ वास्तवमै मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभयो ।
इग्नेसियसका अतिरिक्त अन्य प्रारम्भिक लेखकहरूले पनि येशूको बारेमा प्रचुर मात्रामा बताएका छन् । तीमध्ये पोलिकार्प (ख्रिस्टाब्द करिब ६९-१५५), ओरिगेन (ख्रिस्टाब्द १८५-२५३), जस्टिन मार्टर (ख्रिस्टाब्द १००-१६५), तर्तुलियन (ख्रिस्टाब्द १६०-२१५), अलेक्जेन्ड्रियाका क्लेमेन्ट (ख्रिस्टाब्द १५०-२१५) उल्लेखनीय छन् । यीसाथै अन्य प्रारम्भिक ख्रीष्टियानहरूले ख्रीष्ट, उहाँले स्थापना गर्नुभएको मण्डली र उहाँका अनुयायीहरूको बारेमा बृहत् मात्रामा लेखेका छन् ।
प्रेरितहरूले येशूको बारेमा भएका अपरिहार्य सत्यताहरू तिनीहरूका अनुयायीहरूलाई होसियारीपूर्वक सिकाए । ती शिक्षाहरू एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म र एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म सठिक ढङ्गमा प्रेषण हुँदै आएका छन् । तब निर्णय यही हो कि “प्रारम्भिक मण्डलीका लेखकहरूले तिनीहरूका जीवनी र वचनहरू दुवैद्वारा प्रमाणित गरे कि सुसमाचारका विवरणहरूमा उपलब्ध येशूको जीवनको सम्बन्धमा भएका ऐतिहासिक वणर्नहरू सही र भरोसायोग्य छन् ।”
येशू सम्बत भनिन्छ
नेपाली ख्रीष्टियान इतिहासमा आज ऐतिहासिक दिन साबित भएको छ ।
असल ख्रीष्टियान बनी जिउन चेष्टा गर्ने एक मान्छेको कथालाई बनयानले यसमा सशक्त ढङ्गमा उतारेका छन् ।